Factorylọ ọrụ China Wood router atc na ndị nrụpụta | JCUT
1. Blanking, olulu mmiri, mpekere, isi ụzọ, egwe ọka, wdg, mgbanaka anọ na-atụgharị isi n'okpuru mma, mma ịgbanwe usoro na-enweghị nkwụsị, iji nweta akpaaka.
2. Njikwa ihe eji arụ ọrụ njikwa, nzuzu ọrụ, ndị na-arụ ọrụ nwere ike ịnọ na ọrụ mgbe ọzụzụ dị mfe, enweghị mkpa maka ndị ọrụ aka ọrụ.The igwe na-akpali nimily, arụmọrụ dị elu, na-enyere gị aka ịghọta mmụpụta arụpụtaghị ihe. Ngwaọrụ ahụ kwagidere elu igwe ikuku jụrụ ọkụ HQD, sistemụ servo zuru ezu, ngwa eletriki batara na akụkụ ndị ọzọ, arụmọrụ kwụsiri ike.
3. Tebụl maka tebụl adsorption tebụl, nwere ike ịmịcha ebe dị iche iche nke ihe, na-edozi obere efere na-enweghị nchụpụ, nhazi nhazi dị mma, nha efere ziri ezi.
4. Mkpoko mmanụ eletrik, enwere ike ịtọ ya dịka oge nke mmanụ akpaka, hụ na lubrication nke ụzọ ụgbọ ala na-efegharị efegharị, ịgbatị ndụ ọrụ. Nduzi ụzọ okporo ụzọ Taiwan dị elu, akara aka dị elu, ndụ ọrụ, nnukwu kọntaktị, ikike ibu nwere ike, ịnabata teknụzụ okporo osisi kwụ ọtọ nwere ike ime ka ọrụ kwụsie ike.
4. na-eme ka ọ dịkwuo elu ma sie ike gantry, plate steel mgbe ịchachara na nhazi planer, gbakwunye ịgbado ọkụ, nke kwekọrọ na ọgwụgwọ tempering nke abụọ, hụ na gantry ogologo oge, na-arụ ọrụ na-enweghị nrụrụ.
5. A na-emeso akwa nkedo ígwè n'akụkụ akwa ikuku na-ekpo ọkụ iji gbochie efere n'akụkụ nrụrụ ma metụta izi ezi njem njem Y-axis.
Ngwongwo oche, uko, ube akwa, akwa ulo, ihe ndi ozo.aka ulo uka tinye onwe gi n ’onodu onye ozo itinye onwe ya n’ onodu onye ozo, ambry, oche, oche udiri, oche ulo, igbe osisi, ihe eji akpu osisi na akụrụngwa, atọ. nhazi akụkụ ngbanwe nhazi, ọnụ ụzọ ụlọ, ọrụ aka osisi, ibo ụzọ wenqi, ihu mpịachi, usoro mpịcha usoro ịpịpụta ihe eji achọ ụlọ dịka ụdị ihe dị iche iche nke ihe eji arụ ụlọ, igwe egwe osisi, nsọtụ, mpịchi, ihe ọkpụkpụ na nhazi aka ndị ọzọ.
Ngwunye Ngwakọta akwa akwa R9 ATC CNC CNC
Mpaghara Ọrụ 1300mm * 2500mm * 200mm
Gbasaa HQD 9KW ikuku jụrụ ATC spindle + HQD5 * 4 CNC drill package
Akwukwo oru 12 ọnọdụ servo disk okpu ụdị akpaaka ngwá ọrụ na-agbanwe mgbanaka
Ọgbọ Yaskawa Japan 850w AC servo moto
Ọkwọ ụgbọ ala Onye ọkwọ ụgbọ Japan Yaskawa 850w
Linear okporo ụzọ X, Y, Z axis nabatara okporo ụzọ Hiwin Linear 25
Usoro njikwa Usoro njikwa Taiwan Syntec 6MB nwere ezigbo ntụgharị elektrọnik
Ihe mmetụta ngwaọrụ Ihe mmetụta ngwaọrụ
Onye na-anakọta uzuzu 5.5kw / 380v
Chọta ọrụ Akụrụngwa L pịnyetara ebe a na-arụ ọrụ, ya na profaịlụ aluminom abụọ na-edobe ihe inyeaka, na-edozi nsogbu nke ịtọpụ efere n'usoro usoro.
Nke gara aga: 1325 gbara mkpị na anọ ATC
Osote: Linear atc cnc rawụta